Badhasaabada xaafadaha magaalada Sioux City waxay soo saareen bayaan ay ugu baaqayaan dhammaan | KWIT
Waxay ku boorinayaan dhammaan maamul-goboleedyada-saddexda-gobol inay taxaddar muujiyaan markay qaadanayaan xannibaadaha hadda jira iyo inay shacabku ka digtoonaadaan raacitaanka dhammaan tilmaamaha caafimaadka iyo badbaadada.
Waxay ka codsanayaan dhammaan ganacsatada inay qaadaan mas'uuliyadda wixii cudur faafitaan ah ama faafitaan ah ee xaruntooda ah. Taas waxaa ka mid ah bixinta macluumaad sax ah shaqaalaha iyo dadweynaha.
Farriinta Isniinta ayaa imaaneysa iyadoo Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds uu sheegay inay qeyb ahaan dib u furi doonaan ganacsiyada iyo kaniisadaha ku yaal 77 ee gobollada 99 Iowa.
Taasi waxaa ku jira dhammaan Siouxland, marka laga reebo Gobolka Woodbury.
Laga bilaabo 1-da Maajo, Reynolds wuxuu leeyahay gobollada tirada yar ee dadku ku badan yahay; makhaayadaha, xarumaha jimicsiga, dukaamada tafaariiqda iyo suuqyada ayaa loo oggolaan doonaa inay dib ufurto boqolkiiba 50 awoodda.
Reynolds wuxuu sheegay in 77-da degmo ay soo mareen hoos u dhac ku yimid waxqabadka virus labadii isbuuc ee lasoo dhaafay.
Reynolds waxay xireysaa xiritaan ganacsi oo horey loo dalbay 22 degmo oo kale illaa May 15.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey sagaal dhimasho oo dheeri ah Isniinta taas oo loo aaneynayo COVID-19 oo ah 127 qof. Waxaa jiray ku dhawaad ​​400 kiis oo cusub oo la xaqiijiyey in ay guud ahaan gaarayaan 6,000.
Gobolka Woodbury wuxuu tiriyay in kabadan rubuc kiisaska cusub.
Caafimaadka degmada Siouxland waxay soo sheegeen 115 kiis oo cusub oo ah in kabadan 600.
Hal dhimasho ayaa ka dhacday Gobolka Woodbury.
In kabadan 2,000 oo tijaabo ayaa laga sameeyay Gobolka Woodbury. Konton iyo lix bukaan ayaa duubay.
Gobolka Dakota ayaa soo sheegay geeridiisii ​​ugu horreysay dhammaadka wiigga. Isku soo wada duuboo, 56 qof ayaa u dhinta cudurka Nebraska iyada oo in ka badan 3,000 xaaladood la xaqiijiyay.